Fomba telo hindramana boky miaraka amin'ny fitaovana Kindle na App
Web & Search Ny tsara indrindra amin'ny tranonkala
Boky 'Em Dano: Fomba telo hindramana boky miaraka amin'ny fitaovam-piasana
Niroborobo mialoha ny lalao video dia nahazo ny haavony ankehitriny izy ireo, ny famakiana boky dia ny fotoana mahafinaritra ahy indrindra amin'ny ankizy. Amin'ny tontolo tsotra dia toy ny pasipaoro ho an'ny tontolo vaovao iray feno nofinofy, mistery ary fianarana.
Ary indray, afaka nividy boky maromaro ihany aho raha nomeko ny tetibola voafetra ho ahy. Noho ny hetahetako tsy azo itakiana ny famakiako ny famakiako, dia nahitako loharanom-bokim-piraketana sy tranomboky ho an'ny daholobe ho loharano tena tsara ho an'ny fanitarana ny fahafaham-pamakiako tamin'ny alàlan'ny fandefasana tsara sy tranainy.
Miaraka amin'ny fanampiana ireo ebooks amin'ny fifangaroana, ny fisavana koa dia mitaky ireo safidy nomerika izay manitatra bebe kokoa ny famakivakiam-piainanao. Izany dia ahitana ny andian-tsambo Amazon Kindle , izay nanapaka ny tsena ho toy ny mpamaky mpamaky safidy ho an'ny olona maro.
Raha manana Kindle ianao, na ny mpamaky E Ink toy ny Kindle Paperwhite sy ny tabilao Kindle na tabilao amazonin'i Amazon toy ny Kindle Fire HD na ny Kids Edition dia avy eo dia mividy ireo eBooks Kindle ho anao. Ny tompon'ny app Kindle ho an'ny fitaovana finday hafa na PC sy Mac dia afaka manafatra boky ihany koa. Na inona na inona fitaovana dia manana safidy telo ianao amin'ny fandefasana boky:
Miangona avy amin'ny tompona Kindle iray hafa
Nindramina tao amin'ny tranombokim-panjakana
Nindraminy avy amin'ny Tranombokim-bokan'ny Amazon Kindle Owners
Ny fomba isan-karazany dia mora ampiasaina raha toa ianao ka manana fifandraisana amin'ny Internet. Ny mpindram-bola ara-bola ihany koa dia mila carte de bibliothèque ary ireo izay mampiasa ny Tranombokin'ny trano famandrihana Kindle Owners dia tokony hanana mpikambana Amazon Amazon. Vonona hindramina ireny ebook ireny? Ity ny dingana manaraka ny antsipirihany momba ny fomba ahafahanao maka boky amin'ny alalan'ny fomba isan-karazany.
Miankina amin'ny tompony hafa
Raha fantatrao ny tompona Kindle iray hafa, dia afaka maka boky ebooks amin'izy ireo ianao mandritra ny 14 andro. Amin'ny maha-mpampisambotra anao, tsy mila manana ny Kindle ianao. Izany dia satria afaka mindrana boky ebooks amin'ny fampiasana App Appel amin'ny smartphone, tablette na PC ianao. Mariho fa ny gazetiboky toa ny gazetiboky sy ny gazety dia tsy azo alaina amin'ny alalan'ity fomba fitsaboana ity. Tsy ny boky rehetra ihany no azo aloahana.
Dingana 1: Mba hindrana boky avy amin'ny tompona Kindle iray hafa, tsy maintsy ampindraminy aloha izy. Amin'ny vaovao hafa, mafana ny rano. Amin'io fanamarihana io, ny tompon'ilay lohateny dia tsy maintsy mandeha any amazon.com/mycd ary mankanesa ao amin'ny ebook izay tianao hindramina. Avy any izy afaka miditra amin'ny fizarana " Manage Your Content and Devices " ao amin'ny kaontiny.
Dingana 2: Asaivo mitsindrona ny boaty " Akany " eo akaikin'ny lohatenin'ny ebook, izay aseho amin'ny ellipsis. Avy eo, tsindrio amin'ny " Miantsoa ity lohateny ity ." Raha tsy misy ny safidy, midika izany fa tsy azo ekena ny fampindramam-bola.
Dingana 3: Raha azo ekena ny famoahana ilay boky, dia hahazo saha maromaro azonao atao ianao. Ny saha takiana dia ny adiresy mailaka sy ny anaran'ny mpampindram-bola . Ny adiresy e-mail dia tokony ho ny olona manokana ary TSY ny adiresin'ny Kindle. Rehefa avy nameno ny saha ny mpandraharaha iray, tsindrio ny bokotra " Send now ".
Dingana 4: Rehefa navoaka ny boky, kitiho ny mailaka ary manokatra ny hafatra. Ao amin'ny vondrona mailaka, tsindrio eo amin'ny tabilao izay milaza hoe " Raiso ny bokinao nindramina izao ." Ho soratana ao ianao ary haka fitaovana handefa ilay boky nindramina , ary tsindrio avy eo ny bokotra " Accept Loaned Book ". Raha tsy manana fitaovana Kindle ianao, dia hahazo torolàlana momba ny fomba hakana ny boky ao amin'ny PC na Mac ianao.
Dingana 5: Mamerina ilay ebook, mandehana amin'ny " Manage Your Content and Devices " amin'ny adiresy " amazon.com/mycd ". Avy eo, ny lohatenin'ilay boky dia averinao eo ambanin'ny tabilao " Ny momba anao ", tsidiho ny boaty ao amin'ny " Select " ary tsindrio eo amin'ny boaty " Action ". Avy ao amin'ny menio pop up dia mifidy " Avereno ity boky ity ." Manamarina ny fiverenana amin'ny alàlan'ny fanindriana " Eny ".
Ataovy ao an-tsaina fa ny boky dia azo alaina indray mandeha amin'ny alalan'ny kaonty mitovy amin'io fomba io mba tsy ahafahanao mamerina fotsiny ilay boky voarara ary avy eo dia averimberinao hatrany izany. Ny tompon'ilay boky ihany koa dia tsy afaka mamaky izany raha toa ka entin'ny mpampiasa iray hafa izy.
Miankina amin'ny tranombokim-bahoaka
Na dia tsy misy aza ny endri-tsoratra tsy ara-batana, dia ny tranombokim-panjakana mahaleotena efa ela no mijanona ho toy ny fandefasana boky ebooks. Izany dia mampitony ny kibon'ny foko. Ny zavatra rehetra ilainao dia ny mijery raha ny tranokalam-bokinao dia mametraka boky ary tsara ny mandeha raha mbola manana ny karatra library ilaina. Satria satria dikan-tsoratra no dikan-teny dia tsy midika fa ny birao dia manana dika tsy voafetra mba hividianana azy. Tahaka ny boky mahazatra, ny kopia nomerika rehetra dia raisina toy ny lohateny iray ary afa-mitentina olona iray monja amin'ny fotoana iray.
Dingana 1: Fantaro raha toa ka manokatra ny boky Kindle ny tranombokim-panjakana. Azonao atao ny manamarina ny tranokalan'ny tranokala na mampiasa OverDrive mba hanamarinana fa manao izany izy ireo. Mba hampiasana ity farany ity dia mandehana any amin'ny tranonkalanao ary soraty hoe "search.overdrive.com."
Dingana 2: Raha mamoaka boky Ejipsiana Kindle ny tranomboky, mandehana any amin'ny tranonkalany ary tadiavo ny lohateny tianao hampindramina.
Dingana 3: Aorian'ny nahitanao ny boky tianao, dia asio sonia ao amin'ny kaontinao Amazon raha vao tonga any amin'ilay tapakila fanamarinana ianao. Avy eto, misafidy ny fitaovana na app App Kindle fa tianao ny mandefa ny ebook entrée.
Dingana 4: Raha mampiasa Kindle, mifandray izany amin'ny Internet amin'ny alalan'ny WiFi. Tokony horaisinao ny boky raha toa ka ampiasaina ny fonosana Kindle's Whispersync. Raha tsy mila mila manitsy ny Kindle ianao. Mba hanaovana izany, mandehana ao amin'ny menu Kindle ary tadiavo ny takelaka Quick Actions (toa tahaka ny fitaovana). Ity dia hamoaka fanontana hafa. Tadiavo ny " Sync My Kindle ." Tokony ho azonao avy eo ny boky nindraminao.
Nindramina tamin'ny Tranombokim-bokan'ny Trano famoaham-bokatra
Ny haingo, ny fandefasana maimaim-poana ary ny fahafahana mijery ny fampisehoana dia tonga ao an-tsainao voalohany rehefa mieritreritra ireo tombontsoa avy amin'ny mpikambana ao amin'ny Amazon Prime ny olona. Ho an'ireo tompon-tanana Kindle, na izany aza, ny serivisy koa dia manome fahafahana miditra amin'ny habetsaky ny ebooks maherin'ny 800,000 amin'ny alàlan'ny tranom-bozaka misy azy.
Ny fepetra maha-mpikambana mpikambana ao amin'ny Amazona ny Praiminisitra dia azo antoka fa mametra-pitenenana ny fandaharanasam-bokin'ny Amazon amin'ny famandriham-bola amin'ny fanjakana izay nomena ny fangatahana vola. Ny tombony iray azo avy amin'ny Tranombokim-bola mampindram-bola ao amin'ny Kindle Owners raha oharina amin'ny fandefasana azy amin'ny namana na ny tranomboky, dia tsy midika izany fa tsy mifanaraka amin'ny fetra farany ny fifidianana. Raha vantany vao navoaka daholo ny kopian'ny bokin'ny tranomboky iray, ohatra, dia tsy afaka mindramina ianao mandra-piveriny. Amin'ny programa Kindle Owners, dia tsy voatery hiatrika fotoana voafetra ihany koa ianao amin'ny boky nindramina, toy ny fotoana maharitra 14 andro izay nindramin'ny tompon'ny Kindle hafa na ny daty hiderana lohateny toy ny ataonao amin'ny tranokala nentim-paharazana. Ireo boky nindramina tamin'ny alalan'ny programa dia azo zaraina amin'ny fitaovam-pitaovan'ny Kindle. Tadidio fotsiny fa afaka manonitra boky iray ianao amin'ny fotoana iray.
Ireto misy toro-lalana ho an'ny bokin'ny bookworm izay te hanamarina ny lohateny rehetra misy ao amin'ny serivisy.
Dingana 1: Mandehana any amin'ny Kindle Store avy amin'ny fitaovana Kindle. Avy eo, tadiavo ny sary miafina, izay aseho amin'ny ellipsis vertika, amin'ny fanoratana ity lesona ity.
Dingana 2: Ao amin'ny sakafo dia miantsoa amin'ny Tranombokim-boky " Tranombokin'ny Kindle Owners" . Izany dia hanokatra efijery hafa izay ahafahanao mikaroka lohateny izay liana amin'ny fanamarinana. Tokony hijery sokajy samihafa toy ny eBooks an'ny ankizy, tantara, ary tsy fialan-tsasatra. Raha tsy izany dia azonao atao ihany koa ny mijery ny sokajy " Kindle eBooks " rehetra. Mariho fa afaka miova isaky ny volana ny safidy misy.
Dingana 3: Raha vao nahita ilay boky tianao ianao, tadiavo izany mba hitondra safidy roa. Safidy iray dia ny mividy ilay boky mivantana kanefa hitanao ny bokotra iray hafa izay milaza hoe " Prindrana maimaim-poana ." Alefaso ny iray ary tena tsara izany.
Raha vantany vao manomboka mampiasa ny serivisy ianao ary manana boky voamarina, dia hanangana safidy menônan'ny bokotra "Borrow for Free" ianao amin'ny famerenana ny bokinao amin'izao fotoana izao. Ireo eBooks navoaka dia ho tonga ihany koa rehefa miala ny mpikambana Amazon Amazon ianao. Ao amin'ny pejy fanampiny, misy fanamarihana, tsoratadidy na hevi-dehibe izay ataonao ao amin'ny boky nindramina dia ho voavonjy ao amin'ny kaontinao Amazon, izay mamela anao hahita azy ireo indray raha tokony hanapa-kevitra ny hindramina na hividy ny boky amin'ny ho avy ianao.
Ny famerenana famandrihana amin'ny tranokala fanofana ho an'ny ankizy ao an-trano dia toa mora ihany:
Dingana 1: Mamerina bokotra iray, mandehana any amin'ny tranokalanao ary soraty hoe " amazon.com/mycd " mba hampiakatra ny fizarana " Manage Your Content and Devices " ao amin'ny kaontinao.
Dingana 2: Eo ambanin'ilay tabilao " Ny vontoatinao ", tokony hahita lisitry ny lohateninao ianao. Aorian'ilay lohateny tianao haverina, tsindrio eo amin'ilay boaty eo ambanin'ny sivana " Select ". Raha vao voamarina dia tsindrio eo amin'ny tabilao " Actions " eo akaikiny, izay aseho amin'ny marika ellipsis.
Dingana 3: Ny fikitihana ny tabilao Action dia hanangana boaty vaovao pop up menu izay misy lisitra samihafa. Ny iray amin'izy ireo dia ny " Boky fiverenana ." Tsindrio fotsiny ny " Boky fiverenana " ary hamerina ny lohateny amin'izao fotoana izao izay nindram-bola, ka afaka manofa boky hafa eo amin'ny toerany.
Ary any ianao, ireo fomba isan-karazany mba hindrana boky amin'ny alàlan'ny fitaovana Kindle na ny app Artikla.
Famaritana ny fitantanana finday
Benefits amin'ny Telecommuting
Trendy Mobile Apps ho an'ny iPhone sy Android
Ny Apps iPhone tsara indrindra ho an'ny jamba sy ny fahalemena
Inona no atao hoe ReplayGain?
Ataovy ny tanjonao manokana amin'ny Internet
Fivarotana finday - Pros and Cons of SMS Marketing
Review: iBlazr Flash
Podcasting: tsy mila mandeha irery ianao
Ny zavatra rehetra azonao atao amin'ny Zillow
Ahoana ny fametrahana sary ao anaty doka
13 Fampihetseham-panaovan'ny TV Ny Fitiavanao Apple TV dia tia anao
Famindrana sarimihetsika sarimihetsika 8mm taloha ho an'ny DVD na VHS
Mamaky fitaovana ny jailbreaking, ary eto no misy dikany
Manana planina fanarenana amin'ny loza voajanahary (DRP) ve ianao?
Ampio sary amin'ny blôgy bilaogera amin'ny solosainao
Fantaro ny mpitantana ny preset amin'ny Photoshop sy Photoshop Elements
Ahoana ny fomba fanoratana amin'ny format PowerPoint 2010 Format
Ahoana ny fiarovana ny iPad
Fomba 5 hampiasana vola amin'ny Open Source Software
Ny 32 hatramin'ny 39-inch LED / LCD TVs
Mamorona GIF amin'ny Giphy Cam App
Inona ny rakitra DVDRIP?
Misafidiana ny Channel router tsara indrindra hanatsarana ny Wireless
Ahoana ny fijery ny hafatra Gmail iray manontolo?
Ity ny adiresy IP YouTube sy ny fomba fampiasana izany hijerena ireo lahatsary YouTube
Fifampiresahana amin'ny Google Voice
Torolàlana ho an'ny CCD & CMOS Camcorder Image Sensors
BIOS Settings - Accessing, CPU, ary Memory Timings
Mila ny fanohanan'ny LTE ao amin'ny Smartwatch ianao?